Yintoni ecaphukisa abantu malunga nee-imeyile | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 23, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu baseCCLoop babeke le infographic kwinto ecaphukisa abantu malunga ne-imeyile.
I-95% yabasebenzisi abakwi-Intanethi baseMelika basebenzisa i-imeyile kunxibelelwano nakwishishini. Esi sisixhobo esihle sokunxibelelana kunye nokufikelela kubathengi abatsha, abakhoyo nabaza kubakho. Nangona kunjalo, i-imeyile ayikho ngaphandle kokucaphuka kwayo. Ngaphandle kwale micimbi, i-imeyile ayikaze itshintshwe kwaye iya kuqhubeka nokukhula kule minyaka izayo. Ngaba awuqinisekanga? I-infographic engezantsi inokutshintsha ingqondo yakho:
Inqaku elinye kule… ndingahlehlisa kancinci ukuba i-imeyile ikulindile kwaye ingena kuludwe lwakho Okulindelweyo nge-imeyile kuye kwanda ukuphakama kule mihla. Ukuba andiphenduli i-imeyile ngaphakathi kweeyure zabanye abathengi bam, ilandelwa ngeposi yelizwi, izingxoxo, iiposti ze-facebook, imiyalezo ebhaliweyo… argh!
Ividiyo: Ngaba ukuthengisa kuyenza imveliso?